एवार्ड विदेशमा हुनु ठीक कि बेठीक ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः असार १९, २०७४ - साप्ताहिक
एवार्ड विदेशमा हुनु ठीक कि बेठीक ?
नेपाली संस्कृति विश्वसामु पुर्‍याउने उद्देश्यले हो भने ठीक, देखाउने मात्र हो भने बेठीक ।
-हेमन्त गौतम, टेलिभिजनकर्मी
ठीक र बेठीक दुवै । ठीक यो अर्थमा कि नेपाल र नेपाली कला–संस्कृतिको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्छ, फराकिलो बन्छ तर विदेशमा आजसम्म जति पनि नेपाली फिल्म एवार्ड भए, सबैजसोमा जोडिन्छ नेपाली फिल्मको बजार विस्तारको नारा, तर हालसम्म दर्जनौ एवार्ड विदेशमा सम्पन्न भैसक्दा त्यसबाट कति बजार विस्तार भयो र नेपाली फिल्मको मार्केट कति बढ्यो सबैको जानकारीमा छ । केही वर्षयता विदेशमा हुने एवार्ड कलाकर्मीहरूलाई विदेश देखाउने घुमाउने र एवार्ड लेनदेनमा मात्र सीमित छ । त्यसैले अबका दिनमा विदेशमा एवार्ड गर्दाको प्रभाव पहिले नै मूल्यांकन गरिनु जरुरी छ ।
-वैकुण्ठ पराजुली, सञ्चारकर्मी
विदेशमा एवार्ड वितरण गर्दा नेपाली चलचित्रको स्तर बढाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनका दृष्टिले सकारात्मक हुन्छ, तर एवार्डको आयोजक दरो र आयोजना व्यवस्थित हुनुपर्छ ।
-ऋषिराज आचार्य, निर्देशक
व्यवस्थित तरिकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर विदेशमा चलचित्र एवार्ड वितरण गर्नु धेरै राम्रो हो । त्यसले गर्दा विदेशमा रहेकाहरूलाई नेपालमा पनि राम्रा चलचित्र बन्छन् भन्ने जानकारी हुन्छ ।
-सुनिल रावल, निर्माता
अहिलेको अवस्थामा एवार्ड वितरण गर्न विदेश नै जानुचाहिँ ठीक होइन । एवार्ड वितरण गर्ने नै हो, घुम्ने नै हो भने वीरगन्ज, जनकपुरजस्ता ठाउँ जानु, जहाँ नेपाली सिनेमाको ठूलो बजार भए पनि मार्केटिङ राम्रो छैन । विदेशमा लगेर कलाकार, पत्रकार अनि पाहुनाहरूको विचल्ली बनाउनुभन्दा स्वदेशमै एवार्ड वितरण गर्नु पैसा, श्रम, समय बचतको हिसाबले उत्तम ।
-प्रभात लामा, रेडियोकर्मी
विदेशमा एवार्ड वितरण समारोह हलिउड र बलिउडले पनि गरिरहेकै हुन्छन् । नेपाली चलचित्रको एवार्ड समारोह विदेशमा हुनु राम्रो हो । यसले चलचित्रकर्मीहरूमा मोटिभेसन हुन्छ ।
-अलिशा राई, अभिनेत्री
मन, वचन र कर्मलाई साँचो बनाएर हिंडियो भने जहाँ गए पनि ठीक ।
-दिनेश राउत, निर्देशक
मर्यादित र अनुशासित ढंगबाट सम्पन्न गर्न सकियो भने ठीकै हो अन्यथा विदेशमा काम गरेको धाक देखाउनका लागि मात्र हो भने नगरेकै राम्रो ।
-बेनिशा हमाल, अभिनेत्री
व्यवस्थापन स्तरीय भए राम्रो ।
-वर्षा राउत, अभिनेत्री
विदेशमा एवार्ड वितरण गरिनु राम्रो हो, तर स्तर बढाउन सकिएन, कलाकर्मीहरूलाई सम्मान दिन जानिएन वा माग्ने ताल देखाइयो भने विदेशमा गरिने एवार्ड कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन ।
-सुदर्शन थापा, निर्देशक
आफू जान पाए ठीक, नपाए बेठीक ।
-भरत सिटौला, गायक
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालमा पनि चलचित्र उद्योग छ र यहाँ पनि राम्रा चलचित्र बन्छन् भन्ने जानकारी प्रवाह गर्न विदशी भूमिमा एवार्ड वितरण गर्नु राम्रो हो ।
-पवन शर्मा, अभिनेता
एवार्ड निष्पक्ष ढंगबाट वितरण गरिने हो भने ठीक छ । अझ नेपाली चलचित्रकर्मीलाई विदेशको सयर गराउनका लागिसमेत हो भने त झन् राम्रो ।
-श्रद्धा प्रसाईं, अभिनेत्री
नियत ठीक भएसम्म विदेश त के चन्द्रमामा गरे पनि हुन्छ ।
-अशेष अधिकारी, सञ्चारकर्मी
नेपाली चलचित्र उद्योग विदेशसम्म पुग्नु त गज्जबको कुरा हो नि, तर सम्मानित बनाउन सक्नुपर्‍यो, अपमानित होइन ।
-अभिमन्यु निरवी, चलचित्र लेखक
राम्रो कुरा त हो, तर पहिले विदेशमा नेपाली चलचित्र कसरी प्रदर्शन गर्ने भन्ने विषयमा जान्नु आवश्यक छ । विदेशमा चलचित्र पुगेको हुँदैन, एवार्ड गर्नै हतार हुन्छ ।
-प्रकाश पौडेल, गायक
एवार्ड कार्यक्रम विदेशमा हुनु भनेको हाम्रो कला विदेशीमाझ पुग्नु पनि हो, तर हाम्रो कार्यक्रम जसरी विदेशी भूमिमा भैरहेको छ, त्यसले हाम्रो कलाको साख गिराइरहेको छ ।
-विकास सुवेदी, सञ्चारकर्मी
मेरो विचारमा यो राम्रो चलन हो, किनभने यही बहानामा नेपाली चलचित्र तथा चलचित्रकर्मीहरू विदेशमा पुगेर अनुभव बाँड्न पाउँछन्, नेपाली समुदायसँग भेट्न पाउँछन् । उनीहरूबाट विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू कस्ता नेपाली चलचित्र हेर्न चाहन्छन् भन्ने कुराको ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ ।
-दीपाश्री निरौला, अभिनेत्री
रापती म्युजिक एवार्ड
विदेशमा फेसन शो गर्नेछु
बाटो मोडिएपछि हिट भएका अर्जुन पाख्रेल